दुःखीका घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए...
एउटा दलाल जसले हाम्रो जग्गा लुट्यो, घरपरिवारको सुख–शान्ति लुट्यो, उसैको कारण बुबाले आत्महत्याको बाटो रोज्नुभयो । पीडा नै पीडा मिसिएको हामी गरिबको जिन्दगी । बाँचेर मर्नुेपर्ने, मरेर पनि पलपल बाँच्नुपर्ने । खै ! के हो यो ? नवलपरासी, गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७ शक्तिटोलमा छ हाम्रो घर । आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो होइन । धन नभए पनि परिवारमा कहिल्यै अशान्ति थिएन । खोले, जाउलो खाएरै… विस्तृत समाचार
कसरी आफ्नै रहिरहुन् ?
देशैभरका हिन्दू महिला तिजको उल्लास र रौनकमा झुमिरहँदा मेरो आङमा घाम लागेको छैन । कारण, मैले दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बसिदिनुपर्ने ‘पतिदेव’ साथमा छैनन् । जसले जन्माए÷हुर्काए, नौ धारा दूध पिलाए, तिनै आफ्नो भएनन्÷रहेनन् भने एक चिम्टी सिन्दूर सिउँदोमा हालिदिएकै भरमा आफ्ना बनेका कसरी आफ्नै रहिरहुन् ? अहिलेको जस्तो ‘ब्रोइलर’पिरती गाउँमा पुगिसकेको थिएन, त्यो बेला । १४ वर्ष बितेछ विवाह भएको । ०५८ सालमा मागीविवाह… विस्तृत समाचार